The Gardener: တနင်လာ၊ တနင်းလာ၊ တနင်/နင်းလာ။
တနင်လာ၊ တနင်းလာ၊ တနင်/နင်းလာ။
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဟု နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်လျှင် အီမိုချင်စိတ်များ အနည်းငယ်လျော့ကျသွားနိုင်မည်ဟုထင်သည်။
ဖရဲသီးသည်လေးတစ်ယောက် မိုးရွာသောနေ့တစ်နေ့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဝေါပေါ်တွင် "မိုးတိတ်ရင်ကောင်းမယ်။မဟုတ်ရင် ငါအရင်းပြုတ်ပြီ။" ဆိုတဲ့ status တစ်ခု အပ်ဒိတ်လုပ်ဖို့လိုသည်ဟုထင်သည်။ What's on your mind? Suicide လုပ်ခါနီးလူတစ်ယောက်အနေနှင့်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို tweet လုပ်သွားသင့်သည်။ လောကကြီးသည် လူတိုင်းအတွက် မလွယ်ကူပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်း ကံဆိုးနေသည်မမှတ်ပါနှင့်။ သင့်ထက်ဆိုးသူတွေတစ်ပုံကြီး။
ထို့ကြောင့်အပြုံးမပျက်ဟုဆိုသည်။ အခိုင်မာဆုံးဘဏ်နှစ်ခုမှာ ၁။ ဗဟိုဘဏ်နှင့်။ ၂။ မြဝတီဘဏ်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်မွဲလျှင် အားလုံးမွဲမည်။ မြဝတီဘဏ်မွဲလျှင် စစ်သားများလခရမည်မဟုတ်။ ထိုမျှရှင်းသည်။ simple as that. ဘယ်ဘဏ်အခိုင်ဆုံးလဲဟူသောမေးခွန်းအတွက်အဖြေဖြစ်သည်။ ယောက်ခမဆီမှ အကြံယူ၍ဖြေခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ပါ။
ပိုက်ဆံအထုတ်များရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုသောမေးခွန်းမှာကောင်းသည်။ အဖြေမှာလည်းလွယ်ပုံရသည်။ တွေ့ကရာလျှောက်ဝယ်လိုက်ရင်း မြေဈေးတွေတက်ချင်လည်းတက်သွားမည်ထင်သည်။ တခြားဘဏ်များအတွက်တော့သတင်းကောင်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မည်။ ကမ်ဘောဇသည် နာမည်အားဖြင့်မတင့်တယ်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ် ဗဟိုဘဏ်မှငွေထုတ်နေရသည်။ ဆန်းမကောင်း၍ဖြစ်မည်ဟုထင်သည်။ အမည်တွင် မဖွယ်ရာသောစကားလုံးပါနေ၍ပေလောဟုထင်မိသည်။ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်ကို ဆယ်တန်းတွင် အတန်ငယ်သင်ယူဖူးသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံလာသူတို့သည် မိမိတို့၏ နာမည်သတင်းကျော်ဇောမှုအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်ဆိုလား ဖတ်ခဲ့ရသည်။ မှားနေလျှင်လည်းဖတ်စာအုပ်၏ အပြစ်သာဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်လူထွက်များဖြင့် သိုင်းဝန်းထားသော အခိုင်မာဆုံး resourceရှိသည့်ဘဏ်မှာ ကမ်ဘောဇဘဏ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် ဘဏ်ခွဲများကို ငွေပို့နိုင်သောတစ်ခုတည်းသော ဘဏ်လည်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်သည် မြန်မာပြည်ဖြစ်သည်။ ကောလဟာလသည် အရသာရှိသည်။ အချိန်ကိုက်ဖန်တီးသောကောလဟာလမှာထိရောက်သည်။ ဟိုတစ်ခေါက်က ကျန်ဘဏ်တစ်ချို့ပေါင်းပြီး ကမ်ဘောဇကို ဝိုင်းကိုက်လိုက်ကြဖူးသည်။ ဘိုးတော်အေး၏ စောင်မကယ်တင်မှုဖြင့် အခြေအနေငြိမ်သက်ခဲ့ဖူးသည်။
ကမ်ဘောဇသည် ဒေါ်လာအကောင့်အတွက် initiate လုပ်ပြီး ဒေါ်လာစုခဲ့သော အဦးဆုံးဘဏ်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ ငှက်ကထ ဟောင်း၏ အစီအမံကောင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်စုသော ဒေါ်လာများထဲမှ အပယ်များကို အရှုံးခံပြီးရောင်းပြလိုက်သေးသည်မှာလည်း အတော်ကြည့်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ မနှစ်ကရုံတင်ခဲ့သော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ international account အတွက် စွမ်းစွမ်း၁မံ၊ စွမ်း၂မံ၁ ကြိုးပမ်းခဲ့သူများဖြစ်သည်။ ရာဇဝင်ထဲမှာ ဘောကိုထားခဲ့ရမလိုဖြစ်ချေတော့မည်။
ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကို ပိုင်ဆိုင်သော ဘဏ်ဖြစ်သည်။ တတိယမြောက်ပျက် အဖြစ်အထည်ကြီးစာရင်းဝင်မည့် ဘဏ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အချိန်မီ တစ်ဒေါ်လာ မြန်မာကျပ် ၁၂၀၀ ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သည်ဟု မြင်သည်။ ဒါမှ အဆင်းမှာဘီးလေးနဲ့တင့်တယ်မည်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်လည်း နာဂစ်စုဗူးခွဲပြီး ကူညီကောင်းကူညီမည်ဟု ကျနော်ထင်သည်။ ကျနော်ထင်လျှင် လွဲတာများသည်။ သို့သော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် ကမ်ဘောဇချစ်ကြည်ရေးကို ကြိုဆိုမိသည်။ ဘဏ်ခွဲများအတွက် ငွေများကို နေ့စဉ်ထုတ်ထုတ်နေရ၍ ကမ်ဘောဇမှဝန်ထမ်းများရော ဗဟိုဘဏ်မှဝန်ထမ်းများပါ အချိန်ပိုလုပ်ရသည်။ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လူများကို ထမင်းဝေသောကြောင့် အနာထပိဏ်ဟု ချစ်စနိုးခေါ်တွင်သည့်ပမာ အရပ်လေးမျက်နှာမှ ငွေစုထားသူများကို ပြန်ထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် ကမ်ဘောဇဟုခေါ်တွင်သည်ဟု ဆိုရမလိုဖြစ်သည်။ အာရှဓားပြဘဏ်တို့ဘာတို့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်ရသလောက်တန်းစီယူခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ စိတ်ချလက်ချစုထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့စကားကို ဘယ်လောက်စိတ်ချရမလဲ၊ ပြန်မပေးတော့ရင် ဗဟိုဘဏ်ကပေးမလားသိချင်ပုံရပါသည်။ တခြားနိုင်ငံများတွင်ဘယ်သို့ဆောင်ရွက်ကြသလဲမသိပါ။ စင်ကာပူရတွင်တော့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်သူများအနေဖြင့် လှည့်ပတ်သုံးစွဲငွေပေါ်မူတည်ပြီး ဗဟိုဘဏ်တွင် အပေါင်ထားရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဘဏ်ပြုတ်လျှင်အစိုးရဘဏ်မှ အပေါင်ထားသောငွေများကို ငွေစုသူများထံသို့ပြန်ပေးရပါသည်။ သို့သော် ထိုအရာသည်ဥပဒေသသာဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ဥပဒေပေါ်တက်ထိုင်နိုင်သူများအတွက်တော့ ဥပဒေသည်လိုရာသုံးဖြစ်ပါသည်။ ခိုင်မာသော ပေါ်လစီမှာ ငွေများယုံ၂ကြည်၂ ဆက်လက်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်ထက်ပိုကောင်းမည်ဟုထင်ပါသည်။
ကမ်ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဝန်ထမ်းများကို ဗုဒ်ဓဂါယာသို့ ဘုရားဖူးပို့ပေးဦးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဘောနပ်စ်သုံးလစာပေးနိုင်ဦးမည်ဟုလည်း ထင်နေမိပါသေးသည်။ သန့်စင်သော ငွေဖြင့် ရပ်တည်နေသူများသည် ငါးပြားမှ မလျော့ပါးဟုလည်း ဒေသနာတော်တွင် လာပါသည်။ မျက်စိ အမှောင်ဖုံးနေသော မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် မီဒီယာအင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဘောမပါသော နာမည်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ဆန်းကျမ်းလာသဘောအတိုင်း မင်္ဂလာပြုခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အောင်မြင်မှုများဆတိုးမြင့်မားနေဦးမည်ဟုလည်းကျနော်ထင်မိပါသည်။ ကျနော်ထင်လျှင် လွဲတာများသည်။
ကျနော့်ဆရာတစ်ယောက်ပြောဖူးသည့် ငှက်ပျောပင်ဥပဒေသဆိုတာရှိသည်။ ငှက်ပျောပင်ပေါက်များရှင်သန်ကြီးထွားရန် ပင်မကြီးကိုသာခုတ်ပစ်ရသည်။ အကြီးများပြိုလဲမှ အသေးများ စည်ပင်ဝေဆာနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ စီးပွားရေးလောကသည် ထိုသဘောရှိသည်။ သို့သော်မြန်မာပြည်တွင် လူဝင်စားပေါသလိုဘဏ်ဝင်စားလည်းပေါပုံရသည်။ အာရှဓားပြမှ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဖြစ်လာသည်မှာ အင်မတန်လှပသော လူဝင်စားဥပဒေသဖြစ်သည်။ ကမ်မ-ဇဆိုသည့် ဘဏ်သစ်တစ်ခုမထွက်ပေါ်လာဘူးလို့မည်သူပြောနိုင်ပါမည်နည်း။ သိန်းခြောက်ထောင်သည် ဘဏ်များအတွက် သိပ်များသောပမာဏမဟုတ်ပါ။ အတုဖြစ်စေ၊အစစ်ဖြစ်စေ သုံးလို့ရလျှင် ပြဿနာမရှိဟုသာထင်သည်။ မိတ်ဆွေရော ဘယ်လိုသဘောရပါသနည်း။ ။
Labels: Can Baw Za, Cenral Bank of Myanmar, counterfeit money in Myanmar, Kan Baw Za, kanbawza, KBZ, monday, ကမ္ဘောဇ, ဗဟိုဘဏ်, ငွေကြေးမူဝါဒ
ဗုဒ်ဓဟူး ဗုဒ်ဟူး ဗုဒ်ဓဟူးစ်